आज पनि घट्यो सुनको भाउ, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ? — Imandarmedia.com
आज पनि घट्यो सुनको भाउ, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
काठमाडौँ । सुनको मूल्य आज पनि सुनको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाल सुन आज ९ सय रूपैयाँले घटेको हो । बुधबार प्रतितोला ९३ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन आज ९२ हजार ५०० रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
यस्तै तेजाबी सुन पनि सोही अन्तरमा घटेर आज प्रतितोला ९२ हजार ५० रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । बुधबार तेजाबी सुन ९२ हजार ९५० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ।
यसअघि बुधबार पनि सुनको मूल्य ७०० रूपैयाँले घटेको थियो । बुधबारको तुलनामा चाँदीको भाउ पनि प्रतितोला १५ रुपैयाँले घटेको छ । बुधबार प्रतितोला १ हजार २ सय १५ रुपैयाँ कायम भएको चाँदीको भाउ बिहीबार १ हजार २ सय रुपैयाँमा झरेको छ ।
यस्तै शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा बुधबार झण्डै ४० अङ्कको गिरावट भएको छ । जलविद्युत् बाहेक अधिकांश समूहको शेयर ओरालो लागेपछि नेप्से ३९ दशमलव ६ अङ्कले घटेको हो । पछिल्लो गिरावटसँगै नेप्से १ हजार ९५५ दशमलव ७५ विन्दुमा पुगेको छ ।
बुधबार जीवन बीमा समूहको शेयर २ सय ७० अङ्कले, निर्जीवन बीमा कम्पनीको १ सय २५ अङ्कले, व्यापारको ९९, उत्पादनको ९८, होटलको ५९, अन्यको ४६ र बैंकिङ समूहको शेयर ३० अङ्कले घटेको छ ।
दुई सय एक कम्पनीका एक करोड आठ लाख २१ हजार कित्ता शेयर चार अर्ब ७४ करोड ५६ लाख रुपैयाँमा किनबेच भए । सबैभन्दा धेरै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको ४२ करोड ४२ लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिअन्तर्गतको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान उपसमितिको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयहरुले पहिलो चौमासिकको प्रगति विवरणको प्रस्तुत गरेका छन् ।
आजदेखि शुरु भएको उपसमिति बैठकको पहिलो दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् ।
जसअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ४०.९४ र भौतिक प्रगति ४२.६६ प्रतिशत रहेको छ । बैठकमा मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले सडक विभागको वित्तीय प्रगति ४३ र भौतिक प्रगति ४६.४ प्रतिशत भएको बताए ।
उनका अनुसार रेल विभागको वित्तीय प्रगति २७.६३ र भौतिक प्रगति २७.६३ प्रतिशत रहेको छ भने यातायात व्यवस्था विभागको वित्तीय प्रगति २.३२ र नेपाल पानीजहाज कार्यालयको वित्तीय प्रगति ०.४७ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ०.८४ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए ।
यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ६७.७३ र भौतिक प्रगति ७६.७४ प्रतिशत रहेको सहसचिव नुरमोहम्मद खाँले बताए । ऊर्जातर्फ वित्तीय प्रगति ७८ र भौतिक प्रगति ७७.८८ प्रतिशत रहेको र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ वित्तीय प्रगति ४२.६६ र भौतिक प्रगति ७३.६४ प्रतिशत रहेको उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै रक्षा मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ३४.५७ र भौतिक प्रगति ३३.६३ प्रगति रहेको सचिव रेश्मीराज पाण्डेले प्रस्तुत गरे । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ३०.३८ प्रतिशत भएको सहसचिव बुद्ध गुरुङले जानकारी दिए । युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ८५.२२ र भौतिक प्रगति ९५.१० प्रतिशत पूरा भएको सचिव रामप्रसाद थपलियाले प्रस्तुत गरे ।
उपसमितिका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेल रहेका छन् । बैठकमा सचिवहरुले विकास निर्माणका सवालमा भोग्दै आएका नीतिगत तथा कानूनी समस्याका बारेमा समेत उपसमितिलाई जानकारी गराएका हुन ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा कँडेल, सदस्यहरु डा कृष्णप्रसाद ओली, डा दिलबहादुर गुरुङ, डा उषा झा, मीनबहादुर शाही, डा रामकुमार फुयाँल, सदस्यसचिव केवलप्रसाद भण्डारी, प्रधानमन्त्री कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत कार्यालयका प्रतिनिधिसमेतको सहभागिता रहेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीका अनुसार बैठक आगामी मङ्सिर २६ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
एकाएक ह्वात्तै बढ्यो नयाँ बर्षमा फेरि कुखुरा मासुको मुल्य, अब किलोलाई कति ?
नेपाली बजारमा ४०० रूपैयाँ घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?